Lakes Express Operating on the İzmir Isparta Line Waxay keenaysaa Dhaqdhaqaaq Gobolka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean32 IspartaLakes Express on the İzmir Isparta Line wuxuu keenaa Dhaqdhaqaaq Gobolka
24 / 02 / 2020 32 Isparta, Coast Mediterranean, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
yoolalkii lagu muujiyey safka ismarta ee ismarinka waxay keeneen dhaqdhaqaaq gobolka
Lakes Express, oo lagu joojiyey dayactirka waddo-tareenka ee Afyon-Denizli oo la saaray khadka Isparta-İzmir Oktoobar 25, 2019, wuxuu keenay dhaqdhaqaaq weyn gobolka.
Iyada oo ay la jirto abaabulka gudoomiyaha Isparta, Ekspres ayaa dhowaan martigaliyay xubnaha kooxda isboortiga ee Lake Lake.
Guddoomiyaha Isparta Ömer Seymenoğlu, oo u diray 150 xubnood oo ka tirsan kooxda İzmir, ayaa sheegay in Göller Express ay muhiimad weyn u leedahay dib u soo nooleeynta dalxiiska gobolka oo ay aad ugu faraxsan yihiin Maamulka.
Isaga oo ku hadlaya magaca kooxda ay soo xaadireen 7 ilaa 70 xubnood, Gudoomiyaha GÖLDOSK Fikret Yurtaslan ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay dhigaan Lake Express, oo la joojiyay sababa la xiriira dib u cusbooneysiinta wadooyinka, in dib loogu dhigo waqtigii loogu tala galay, dabeecada jidkanina waa mid cajiib ah.
Göller Express, oo si isku mid ah u ordaya khadka 475-kilomitir ee Isparta-İzmir, ayaa dhammaystiray waxbarashadiisa 22 saacadood iyo 30 daqiiqo, isaga oo ka soo guuraya Isparta saacadda marka ay tahay 23:00 iyo Izmir saacaddu markay ahayd 8:30. Ku dhawaad ​​25.10.2019 kun oo rakaab ah ayaa la geeyay harada Lake Express, oo duulimaadyadeeda bilaabay 25.
Rakaabka ka yimaada Burdur ayaa ku safri kara iyagoo si cad u isticmaalaya saldhigga Isparta Gümüşgün.
DMU 4 waxay dejineysaa 262 awooda rakaabka, oo ka kooban 15400 gaari, oo kordhineysa tayada iyo tayada adeegga iyada oo la cusbooneysiinayo wadooyinka, u adeega.
Tareenada Xawaaraha Sare ee u dhexeeya Ankara - Konya - Ankara
Tareenada Xawaaraha Sare ee u dhexeeya Ankara - Eskisehir - Ankara
Aaggu Baaxadiisu waxay ku timid Bursa. T1 Tram Line
Yüksel: Shirkada Shidepan-Yenimahalle Cable-Line si loo Neefsado Gobolka